Haacaaluu Hundeessaa - Wikipedia
Haacaaluu Hundessa (1985 - amma) weellisa Oromoo, barreessaa walaloo fi yeedaloo sirbaa, sabboonaa fi qabsaawaa mirga Oromooti. Haacaaluun weellisaa Oromoo jaalatamaa yoo ta'u eenyummaa fi aadaa Oromoo guddisuurratti of kennee hojjata. Haacaaluun seenaa fi aadaa Oromoo akka beekkamu gochuuf tattaafachuu isaatin ummata biratti beekkama.
1 Ijoolummaa Isaa
Ijoolummaa Isaa[edit | Lakkaddaa gulaali]
Haacaalun kan dhalatee guddate magaalaa Ambootti yoo ta'u barri dhalootasaas bara 1985. Maatisaaf, Haacaalun mucaa shanaffaa yoo ta'u obboloota dhiiraa ja'aa fi obboleeyyan durbaa afur qaba. Akkuma ijoollee Oromoo kamuu Haacaaluun maatisaaf loon tiksaa akka guddate dubbata. Barnootasaa hanga kutaa kudha lamaatti achuma magaalaa Ambotti barate.
Haacaalun baayyinaan maatiisaa biratti kan guddate yoo ta'u akaakayyuusaa biras jiraateera. Akaakayyuusaa waan jaalatuufis, mana barumsa dhihoo jiru dhiisee kan naannoo mana akaakayyuusaa jirutti fagoo deemee barachaa ture.
Haacaalun Looreeti Tsaggaayee Gabramadin wajjin firooma qaba.
Hidhamuusaa[edit | Lakkaddaa gulaali]
Haacaalun sababa siyaasatiin qabamee waggaa shaniif mana hidhaa Ambootti hidhamee ture. Yeroo gara Finfinnee gallees torban tokkof mana hiidhaa Ma'akkalawiitti hidhame ture.
Waggaa shan guutuu yeroo Haacaalun mana hidhaa turetti, jaalalleensaa deddeebitee isa gaafachaa turte. Kanaafis, gaafa mana hidhaatii ba'ee albamii baasu sirba "olmaan kee baayyatee, kan ati naaf gootee" jedhu isheef jecha sirbe. Jaalalleensaa kun Faantuu Damisoo jedhamti; maatin Haacaaluu baayyee kan ishii jaalatan yoo ta'u abbaan Haacaaaluu maqaa baaseefi Beektuu jedhee waama ture.
Sirbootasaa[edit | Lakkaddaa gulaali]
Haacaalun sirba kan eegale ijoollummaatti yoo ta'u kunis yeroo loon tiksaa oolu ture. Ijoollummaatti sirba ijoollen sirbitu sirbaa guddate. Erga guddateeyis wallee cimsee itti fufe.
Haacalun albamiisaa kan jalqabaa bara 2009 baase. Haacaalun albama kana kutaa 12 odoo baratuu baase. Albamii kana baasuf, Jiimata gara Finfinnee deemee Wiixata deebi'aa shaakalaa ture. Albama kana hojjatee fixuufis ji'a torba fudhate. Albamiin kun sirba kudha lama of keessa kan qabu yoo ta'u matadureensaa "Sanyii mootii" jedha. Sirboota kudha lammaan kana keessa sagal walaloo kan barreesse Haacaaluu yoo ta'u kan hafan sadan ammoo Simee Tufaatu barreesse.
Maatiin Haacaaluu keessattuu abbaansaa akka inni weellisaa ta'u hin barbaadu ture. Abbaansaa, Haacaalun baratee karaa barnootaa iddoo guddaa akka ga'u hawwa ture. Haacaalun barnoota qophaa'inaa baratee fixuyyuu walleerratti waan xiyyeeffateef barnoota olaanaa itti hin fufne. Haatii Haacaaluu garuu sirbootasaa ni jaalatti turte.
Albamootasaa[edit | Lakkaddaa gulaali]
Sanyii Mootii (2009)
Waa'ee Keenyaa (2013)
Artistoota Oromoo kutaa 1ffaa: Leensaa Showu, dhihootti kan baname: Waxabajjii 5, 2015
Artistoota Oromoo kutaa 2ffaa: Leensaa Showu, dhihootti kan baname: Waxabajjii 5, 2015
Haacaaluu Anaa Dhufu, dhihootti kan baname: Waxabajjii 5, 2015
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Haacaaluu_Hundeessaa&oldid=29848"
This page was last edited on 21 Onkoloolessa 2017, at 06:06.